तिब्बतमाथि कहिल्यै हवाई जहाज उड्दैन, आखिर किन ? - तिब्बतमाथि कहिल्यै हवाई जहाज उड्दैन, आखिर किन ? -
तिब्बतमाथि कहिल्यै हवाई जहाज उड्दैन, आखिर किन ?
उज्यालो प्रतिनिधि १ जेष्ठ २०७७, बिहीबार रोचक बिचित्र
एजेन्सी । तपाईलाई थाहा छ तिब्बतमाथि कहिल्यै हवाई जहाज उड्दैन । यसको पछाडि एउटा डरलाग्दो रहस्य लुकेको छ । यसबारे थाहा पाए पछि तपाई पनि अचम्ममा पर्नुहुनेछ ।
तिब्बत यो धरतीको ती विशेष स्थान मध्येमा एउटा हो जहाँ विमान सेवा एकदमै कम सञ्चालन हुन्छन् । वास्तवमा धेरै उचाईमा भएको कारण यहाँ विमानहरुलाई उड्न असम्भव जस्तैै हुन्छ । यसकारण विमानहरु तिब्बतको माथिबाट उड्दैनन् । यदि उड्यो भने त्यसले ज्यानलाई खतरा पुर्‍याउँछ ।